ဘီပိုးရောဂါ၊ စီပိုးရောဂါရှိသူများအတွက် မကြာခင်က သိရတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ဘီပိုးရောဂါ၊ စီပိုးရောဂါရှိသူများအတွက် မကြာခင်က သိရတဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ပါ။
Posted by manawphyulay on Aug 21, 2011 in Health & Fitness | 21 comments
ဦးဟုတ်စိန်အဘိဓာန်မှာတော့ The Indian Brithwort (*Atistolochia indica)* သာမည
ဣဿရီ တဲ့။ရှမ်းဘာသာကတော့ ၀မ်လီနုတ်ယုံး *(၀၊ခ်ေလီခေူဂ့်ယုင်း*) လို့ခေါ်ပြီး
တရုတ်အခေါ်ကတော့ *ခုံ့ရှော့တန်း* လို့ခေါ်တယ်။
အပင်ကတော့ အစိမ်းရောင် နွယ်ပင်တစ်မျိုးပါ။ ခွာညို၊ ခွာဖြူပန်းလို အိမ်မှာ
အလှစိုက်ထားလေ့ရှိတယ်။အပွင့်က ဥဒေါင်းငှက်နဲ့ ဆင်တူပြီး အဖြူ။ အ၀ါ၊ အစိမ်း၊ ခရမ်းရောင်
အနဲငယ်သမ်းနေတယ်။အသီးကတော့ ကင်းမွန်သီးလို ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်ပြီး အရစ်(အရေးအကြောင်း) အမြောင့်ပါတယ်။အရွက်ရဲ့ အရသာကတော့ နဲနဲဖန်သလိုလို၊ ကွမ်းရွက်ကဲ့သို့လဲအနည်းငယ်ရှိန်းသလိုလိုဖြစ်ပြီး အရသာပေါ့တယ်။
ဒီဆေးအကြောင်းကို မန္တလေး၊ ကျွဲဆည်ကန်နေ နန်းမွေဖေါင် (2nd Year Law) ကနေတဆင့်
သိရခြင်းပါ။ သူမအဖေရဲ့ မန္တလေး မိတ်ဆွေတစ်ဦးဘီပိုးရောဂါဖြစ်ပြီး ယိုးဒယား၊ စင်္ကာပူအထိ သွားကုတာ သိန်းပေါင်းများစွာကုန်ပေမယ့် ရောဂါက မပျောက်ဖြစ်နေတယ်။
စိတ်ပျက်ပျက်နဲ့ မန္တလေးကိုရောက်တော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ဣဿရမူလီ ကို
သုံးကြည့်ခိုင်းတယ်။သူလည်း (၃)လလောက် အဲဒီအရွက်ကို အစိမ်းလိုက် တစ်နေ့ (၃)ခါ၊ တစ်ခါ လေးရွက်ငါးရွက်လောက် ၀ါးစားပြီး ရေသောက်လိုက်တယ်။
နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ အသားအရေလည်း အရင်လို နီကြောင်ကြောင် နီရဲရဲ မဟုတ်တော့ပဲ
အသားအရည်တွေ ၀င်းလာတယ်။ ကြည်လာတယ်။ကျန်းမာရေးလည်း တော်တော်ကောင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ နောက် (၅)လ ကြာတော့ သူယိုးဒယားကိုဆေးစစ်သွားတော့ဟိုကဆရာဝန်တွေက အံ့သြစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ ဘီပိုးရောဂါ လုံးဝပျောက်သွားကြောင်း၊ဘာဆေးတွေ သုံးကြောင်း မေးလာတော့သူက တိုင်းရင်းဆေး ဣဿရမူလီ ဆေးကိုသုံးကြောင်း ပြောလိုက်တယ်။ အခု
(၂) သုံးခွက် တစ်ခွက် ကြိုသောက်ရင်လည်း ရပါတယ်။
ဓါတ်ပုံကို လားရှိုးမြို့ ရပ်ကွက် (၆) ရွှေလီကျောင်းအနီး၊
ဣဿရမူလီ မှတဆင့် ဘီပိုးအတွက် စီပိုးအတွက် ဆေးကောင်းတစ်လက်အဖြစ် ဆက်လက်
*သင်ရဲ့ မိတ်ဆွေထံ ဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ဘေသဇ္ဇဒါန (ဆေးအလှူ) အဖြစ်
ကုသိုလ်ယူကြပါရန် . . . . *
၂၀၁၁ ခု နှစ် ဇွန်လထုတ် သူရဇ်ဇ မဂ္ဂဇင်း မှာ ဆောင်ပါးဖော်ပြထားတာ ဖတ်ရတယ် –
အရွက် တစ်ရွက် ကို ၂၀၀ိ / ၃၀၀ိ ပေးဝယ်ရတယ် တဲ့ –
နောက်ပီး အဲ့ ဒီအပင်ကို လိပ်ပြာ( ဘောက်ဖတ်) အတော်ကြိုက်တယ်ဆိုပဲ –
ရောဂါ ပျောက်တဲ့ သူ ကိုယ်တွေ့ ရေးထားတာ တဲ့လေ –
ကျေးဇူးပါနော်။လက်ဆင့်ကမ်းညွှန်းပေါ့မယ်။ဆေးဖက်ဝင် အပင်တွေကို လူသားတွေအတိအကျမသိကြသေးလို့ ပါ။အပင်တိုင်းလိုလို သူဟာနဲ့ သူ အကျိုးပြုကြတာချည်းပါဘဲ
မနှစ်ကလဲဒီအကြောင်းကို eton လဲရေးဘူပါတယ်၊ ကောင်းပါသည်ထပ်ပြီးရေးတောလဲမဖတ်ရသေးတယ်သူတွေလဲသိသွားရတာပေါ.
ဖုံး ၀၁-၆၄၄၀၉၀ ၊ ၀၉၇၃၀၃၆၆၅၄ သို့ ဆက်သွယ် ၄င်းဆေးဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
sorry ! အင်စိန်မြို့နယ် ကျန်သွားပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာပါ။
အဲ အပင်ကို မတွေ့ဖူးဘူးဗျ .. ကောင်းပါတယ်. . မြန်မာ့ဆေးနည်းတစ်လက်အနေနဲ့ တင်ပြတာ ကျေးဇူးပဲ မမ မနောရေ
ဟုတ်ပါတယ်။ မနောတို့အိမ်နဲ့လည်း နီးပါတယ်။ မင်းစေတီမှတ်တိုင်ဆင်းရင် ရပါတယ်ရှင်….
ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတောညွှန်ပေးပါ ကျနော်က အလုံမှာကျနော်ကနေတာ ကောင်းရင်ဝေဒနာသည်အားလုံးအတွက်ကောင်းတာပေါနော်
အဲ.ဒီ. အပင်ကို……….အိမ်မှာစိုက်လို. မ ရ ဘူး လား ??
မေမေ က စီပိုးရှိနေလို့ပါ…
may ရေ ဖုန်းဆက်မေးလိုက်ပါလားကျနော်ဖုန်းnumber ရေးပေးထားပါတယ်
ှု I just check with the clinic and they said, they can sell the leave and also they are making dry leave like tea leave and so, I will go and check first and then let you know all in detail.
ဟုတ်တယ်အမ ဒီအပင်ကို ညလေးတွေ့ဖူးတယ် ဒီအရွက်ရဲ့အရသာကအရမ်းခါးတယ် ညလေးကြားဖူးတာပေါ့နော် ပြည်ပကိုအလုပ်သွားလုပ်မဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပေါ့နော် ဆေးစစ်တော့ဘီပိုးတွေ့လို့ဆေးကျတာနဲ့အဲဒီကောင်လေးက ဒီအရွက် ကိုတစ်နေ့ကိုသုံးရွက်နှုန်းနဲ့ တစ်လတိတိစားလိုက်တာ ဘာဆေးမှစားစရာမလိုဘူး ဒီအရွက်စားလို့တစ်လပြည့်တဲ့နေ့မှာဆေးပြန်စစ်လိုက်တော့ ဘီပိုးလုံးဝမတွေ့တော့ဘူး အဲဒါတကယ်အဖြစ်မှန်ပါအမ
thanks may if you get the medicine or how is affected please explain to us.
ကျွန်တော်သိသလောက် ၀င်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ အခုလိုဆွေးနွေးတာဟာ မနောဖြူလေးရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဆေးပင်ဟာ အစွမ်းရှိတယ်ဆိုတာပြောတဲ့လူတိုင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စော်ကားမိသလိုဖြစ်သွားရင် (အနူးအညွတ်) တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတာပါ။
ပထမဆုံးက ဘီပိုးစတွေ့ ပြီးလို့ခြောက်လနေရင် နောက်တစ်ခါပြန်စစ်သင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့
နောက်တစ်ခါပြန်စစ်ရင် မတွေ့ တော့တဲ့လူများစွာရှိနေပါတယ်၊ ထပ်စစ်လို့ မှရှိနေရင်တော့ ဒီလူဟာ နာတာရှည်ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်တဲ့သူများဖြစ်သွားပါတယ်။ (ဆိုလိုတာက ဒီခြောက်လအတွင်းမှာ သူ့ အလိုလိုပျောက်သွားသူများရှိတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။)
အဲဒါကြောင့် နန်းမွေဖောင်အဖေရဲ့ မိတ်ဆွေဆိုတာ နဲ့(အဆိုတော်ရူးမလေးပြောတဲ့) ကောင်လေးဆိုတာကဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတာ ဖြစ်ချင် (ဖြစ်နိုင်) ဖြစ်နေမှာပါ။
ဒီအရွက်ကြောင့်လဲ တကယ်ပျောက်တာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်း ကျွန်တော် ငြင်းးဆိုနေခြင်း (လုံးဝ) မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ်လို့ဒီအရွက်သာ တကယ်ပျောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရင် ဒီအပင်ဟာခုနေ ဆေးပညာလောကနဲ့မီဒီယာတွေ အလယ်မှာ ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်နေပါပြီ။
ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဒီပို့ စ်မှာ တင်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်ဟာတော်တော်ကြာနေပါပြီ။
ဒီလင့်ခ်မှာတောင် သူဘယ်လောက်ကြာကြာတုန်းကသိပြီး တင်ထားတာလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါအုံး။ မနှစ်ကတည်းကတင်ထားတာပါ။
ဒီအရွက်သာတကယ်ပျောက်တယ်လို့ အသံထွက်ထွက်ချင်း ဆေးပညာလောက သမားများက လိုက်နေခဲ့မှာသေချာပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလောကသားထဲက ဘယ်သူများ confirm လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုး ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ ဘယ်သူမှမရှိသေးပါဘူး။ (တကယ်လို့ သိခဲ့ရင်၊ရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြောပြပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်၊အမှန်တကယ်ကို ကျွန်တော်သိချင်လို့ ပါ၊ ကျွန်တော့်အမျိုးထဲမှာလည်း ဘီပိုးရှိနေလို့ ပါ)
ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော်အမျိုးကို ဒီအရွက်ကို စမ်းပြီး စားသုံးဖို့ အကြံပြုလိုက်ပါမယ်။
အနည်းဆုံး ဒီရောဂါမပျောက်တောင်မှ ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှ မရှိလို့ ပါ။
အရင်ကတော့ ကောလဟာလ တစ်ခုထွက်ဖူးပါတယ်။ စပါးကြီး သည်းခြေ စားရတယ်ဆိုပြီး။
ဒီလို ကောလဟာလ မျိုးဆိုရင်တော့ စားမိတဲ့သူအပေါ်ကြီးစွာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။
ထပ်ပြောချင်တာကတော့ အပေါ်ကလင့်ခ်လေးတွေကိုဖတ်ပေးကြပါ။ စာဖတ်မပျင်းကြပါနဲ့ ။
အခုလိုရေးပြတာကျေးဇူးပါပဲ..။ ကျုပ်လည်း အမြဲတန်း.. ၀င်ဝင်ပြောလို့.. အနီကဒ်လည်းခဏခဏရတယ်..။ ထပ်ပြောရမှာပါပဲ..။
တကယ်တော့. ကျမ်းမာေ၇းဆိုင်ရာ…ပရိုဖက်ရှင်နယ်.. ဆရာဝန်တွေရှိပါတယ်..။
ဘီပိုးရောဂါ၊ စီပိုးရောဂါရှိသူများဟာ..ဆေးမြီးတိုတွေ..လုပ်လုပ်မနေပဲ… ဆရာဝန်တွေကို.. ပြသတိုင်ပင်ရမှာပါပဲ..။
ဘုန်းကြီး..ရဟန်းဟာ..သူ့ပရိုဖက်ရှင်နယ်.. သာသနာကိစ္စမလုပ်ပဲ.. ပရိုမဟုတ်တဲ့… ကိစ္စတွေဝင်မပါရပါဘူး..။
အခုတော့… ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတာတွေနဲ့.. လူထုကိုကိုယ်တွယ်အုပ်ချုပ်တာတွေပါ ၀င်လုပ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ဒီလိုမျိုးတွေဟာ.. မြန်မာပြည်အနှံ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကို ဖြစ်နေတာမို့.. ဒါဟာ..အမျိုးသားရေးကိစ္စတောင်ဖြစ်နေပါတယ်..။
 Ching,4Duke of Ch´i asked Confucius, What is kingcraft?
Confucius answered: “When the king is king and the minister is minister; when the father is father and the son is son.”
“True indeed!” said the duke. “Were the king no king and the minister no minister, were the father no father and the son no son, could I get aught to eat, though the grain were there?
(ကွန်ဖြူးရှပ် ဘီစီ 722-481)
မီဒီယာသည်လည်း မီဒီယာဘဲဖြစ်ပါစေ။ ။
မန္တလေးဂေဇက် ( အေဒီ၂၀၁၁)
အဲလိုပြောကြေးဆို ငယ်ငယ်တုံးက ကစားလို ထိခိုက်ပွန်းပဲဒဏ်ရာရရင် ဖုံသိပ်၊ မြောင်းရေစိုနဲ့ ပိုးမဝင်မွှားမဝင်ကြတော့ ဘာပြောမလဲ သဂျီးရဲ့..။ သဂျီးလည်း သဂျီးပဲဖြစ်ပါစေ။ (ပြောရရင် ဘယ်နေရာမှာ အသုံးမဝင်လို့ သဂျီးအဖြစ်တင်မြောက်ထားတာများတယ်) ကြားဖူးနားဝရှိတာပြောတာပါ…လွန်တာရှိ ဝန္နာမိ…. :cool:
အားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်စေမယ့် လင့်ခ်လေးတွေကတော့
http://first-11.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9745:2011-08-14-04-33-47&catid=76:miscellanous&Itemid=145 (eleven ဆိုဒ်မှ မြန်မာလိုပါ)
(အဲလိုပြောကြေးဆို ငယ်ငယ်တုံးက ကစားလို ထိခိုက်ပွန်းပဲဒဏ်ရာရရင် ဖုံသိပ်၊ မြောင်းရေစိုနဲ့ ပိုးမဝင်မွှားမဝင်ကြတော့ ဘာပြောမလဲ သဂျီးရဲ့..)
ဖုံသိပ်လိုက်တာကတော့ အလွယ်နည်းနဲ့သွေးအမြန်တိတ်စေဖို့လုပ်ကြတာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ဒဏ်ရာပျောက်ကင်းသွားတာ ကတော့ အဲဒီဖုန် သိပ်တာနဲ့ လားလားမျှ မသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ငယ်တုံးကာလ အခြေအနေမှာ tissue နဲ့ organ တွေ ရဲ့ သဘောသဘာဝကို က အနာကျက်ဖို့(အရိုးဆိုရင်လည်း ပြန်ဆက်ဖို့ ) အင်မတန်မြန်ဆန်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့် ဘာဆေးမျှ မထည့်၊ မသောက်တောင် သူ့ အလိုလို ပြန်ပျောက်ကြပါတယ် (ဒဏ်ရာ မကြီးရင်ပေါ့)။ တော်ရုံတန်ရုံအဖျားရှိရင်တောင် (အရွယ်နည်းနည်းရလာရင်၊ ကျန်းမာရေးချို့ ယွင်းချက်ရှိမနေရင်) ဘာဆေးမှ မသောက်ဘဲ ပျောက်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်သိပ်လိုက်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးကတော့
အဲဒီဖုန်လိုဟာမျိုးတွေမှာ ရောဂါပိုးမွှားပေါင်း ဘယ်ရွှေ့ ဘယ်မျှ ပါလာမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ အနာရင်း လာရင်တော့ သေချာပါတယ် အဖျားကတော့ သေချာပေါက်တက်လာတော့မှာပါ။ မြောင်းရေဆိုရင်လည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ။ ဒီထက်အသေအချာ ပြောနိုင်တာကတော့ biomedical သမားများပါဘဲ။ သူတို့ ကတော့ detail ပြောပြနိုင်မှာပါ။
သဂျီးရေ .. . အနီကဒ်ဘယ်လောက်ပဲ ပလူပျံနေပါစေ၊ ကျွန်တော့်အပေါ်အမြင်စောင်းသွားပါစေအုံး၊ ကျွန်တော်ကတော့ ပြောရမှာပါ (ကိုယ်သိသလောက်)။ ဒီဟာမျိုးတွေက သဘောထားကွဲလွဲတာ၊ အမြင်မတူတာမဟုတ်ပါဘူး။
မှားနေတဲ့ ဟာမျိုးတွေကို အမှန်ကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ စေတနာ သက်သက်ပါ။
တစ်ခုပဲ အလေးအနက်ထပ်ပြောချင်တာက ဒီပို့ စ်ကိုဖတ်မိတဲ့သူတွေရော၊ ကွန့် မန့် ပေးတဲ့ သူတွေ၊ပို့ စ်ရေးတဲ့သူတွေရောကို စော်ကားလိုစိတ် အလျှင်း မရှိဘူးဆိုတာပါဘဲ။